Amavolontiya-Iinkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie
I-Prairie State ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuvolontiya zabantu abanazo zonke iintlobo zezakhono kunye namava.
Cofa Apha kwiSicwangciso sokuBandakanya amaVolontiya
IINKCUKACHA ZAMABHASO EBHUNGA
“Luxanduva lwabo ... abo banamaphepha-mvume njengamagosa enkundla ukusebenzisa uqeqesho lwabo, amava nezakhono zabo ukubonelela ngeenkonzo eziluncedo kuluntu jikelele apho imbuyekezo ingenakufumaneka…. Iinzame zegqwetha elizimeleyo kule mimandla bubungqina bokuziphatha kakuhle kwegqwetha kunye nokuba sempilweni kokusebenzisa umthetho… ”
Intshayelelo, Imithetho yase-Illinois yeNdlela yokuziPhatha
Unyaka ngamnye iPrairie State Legal Services inyanzeliswa ukwala izicelo zoncedo lwezomthetho kwamanye amalungu asemngciphekweni kuluntu lwethu kuba abasebenzi bethu abahlawulwayo abanamandla okuhlangabezana nemfuno. Ngaphandle koncedo lwezomthetho, aba bantu bashiyekile ukuba bahambe ngokwabo ngokwasemthethweni kwaye uninzi luye lwanikezela.
Amavolontiya e-Pro bono bencedisa iPrairie State ukuvala umsantsa wobulungisa ukusukela ngeminyaka yoo-1980. Xa wamkela ityala elinye kuphela elivela kwiPrairie State, uqinisekisa ukufikelela ngokulinganayo kwezomthetho kuloo mntu. Imizekelo yeentlobo zamatyala onokunceda ukuquka ukunceda ixhoba lobundlobongela basekhaya ukuba likhuseleke kumxhaphazi walo; Ukwenza ukuba umntu omkhulu akwazi ukulawula izigqibo zakhe zezemali kunye nokhathalelo lwempilo ngokwenza imiyalelo esexesheni; okanye ukukhusela umntu okhubazekileyo ekwaleni okungekho mthethweni izibonelelo zoluntu.
I-Prairie State ibonelela ngamathuba amaninzi e-pro pro bono yamagqwetha, ukusukela kwiiklinikhi zokucebisa ukuya kumelo olwandisiweyo kumathuba entengiselwano exeshana njengokuyilwa kwegunya lamagqwetha kunye nomyolelo, okanye uthethathethwano neearhente zikarhulumente. Iindawo apho abathengi bafuna uncedo lwakho zinokubandakanya: uqhawulo mtshato kunye nokugcinwa; ukugcinwa kwabantwana abancinci nabadala; umyolelo olula; ukurekhodwa kunye nokutywinwa kweerekhodi zolwaphulo-mthetho;
Ukuzinikela kwexesha kuyahluka ngamatyala, kwaye ayingawo onke amatyala afuna ukuvela kwenkundla. Amavolontiya anokucebisa amanye amagqwetha aseburhulumenteni kunye nokudibana nabasebenzi bakarhulumente wasePrairie.
Awudingi amava oncedo olusemthethweni ngaphambili ukuba ube livolontiya. Umsebenzi we-Pro bono yindlela evuzayo yokufumana amava kwindawo entsha yomthetho, okanye ukucebisa elinye igqwetha kwindawo yakho yobungcali. Siza kusebenza nawe ukulungiselela i-pro bono ithuba kwimidla yakho, izakhono, kunye nokufumaneka.
Kutheni ivolontiya laseburhulumenteni?
Ukwenza umsebenzi wakho wepro bono ngokusebenzisa iPrairie State Legal Services kuza nezibonelelo ezongeziweyo:
I-Prairie State icacisa iimeko zokufaneleka kunye nokufaneleka kwemali.
Amatyala e-Pro bono agqunywe phantsi kwe-inshurensi yaseburhulumenteni yase-Prairie.
I-Prairie State ibonelela ngee-CLEs zasimahla kumagqwetha e-pro bono.
Unokuxhamla kuqeqesho nasekucebiseni kumagqwetha anamava.
Iipro bono iiyure zinokuxelwa kubhaliso lwakho lwe-ARDC lonyaka.
Ukuthatha umhlala-phantsi, ukungasebenzi, ukuphuma-kurhulumente, okanye isiluleko sendlu?
INkundla ePhakamileyo yase-Illinois Imithetho ye-716 kunye ne-756 ivumela umhlala-phantsi, ongasebenziyo, ongaphandle kukarhulumente, kunye neengcebiso zendlu zokwenza iinkonzo ze-pro bono zePrairie State Legal Services.
I-Prairie State ihlala ikhangela amagqwetha ukumela abaxhasi kwimicimbi eyahlukeneyo yezomthetho, ngakumbi kusapho, kubathengi nakumatyala omthetho abadala. Ukuba unemibuzo okanye ungathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga namathuba akhoyo ngoku, nceda unxibelelane nomququzeleli wakho we-pro bono okanye [imeyile ikhuselwe].
Ukuba ungumfundi onomdla wokungena kunye nePrairie State, nceda ubone internship icandelo kwi careers phepha.
Iividiyo zoMhiyozo we-Pro Bono ka-2020
Silwamkela uncedo kuwo onke amavolontiya. Unga ukunceda ukuvala umsantsa wezobulungisa ngokuphendula iifowuni, ukucwangcisa imisitho yokunyusa ingxowa-mali, ukulungisa iiposi, ukunceda amagqwetha ethu, kunye nokunceda abathengi bePrairie State ngeendlela ezahlukeneyo.
Uvavanyo lweProjekthi yeZindlu
Eli thuba lelabantu abahlala okanye kufutshane nenye yezi ndawo zilandelayo: Ichibi, McHenry, Winnebago, Boone, Peoria, okanye Tazewell.
IProirie State Legal Services Housing Project ikhangela abavavanyi ukunceda ukuphanda ucalucalulo lwezindlu. Emva koqeqesho, abavavanyi badibana nabanikezeli bezindlu kwaye barekhoda unxibelelwano lwabo kwingxelo. Abasebenzi bethu baphinde baphonononge kwaye bathelekise iingxelo ezivela kubavavanyi abohlukeneyo ukumisela ukuba ngaba ucalucalulo lwezindlu lwenzekile. Samkela abantu abakhubazekileyo kunye nabantu bazo zonke iintlanga, imibala, ubudala, ubuhlanga, kunye nolwabelana ngesondo.
Fumana umvuzo kunye nembuyekezo yemayile nganye xa uthatha inxaxheba kuvavanyo.
Ukufumana uqeqesho lwezindlu ezifanelekileyo (kunye nomvuzo emva kokugqiba uvavanyo lokuziqhelanisa).
Funda izakhono ezitsha, kubandakanya ukubhala ingxelo.
Nceda wenze uluntu lwakho lubandakanyeke kwaye lwamkeleke.
abavavanyi KUFUNEKA babenayo
isazisi esikhutshwe ngurhulumente
ugunyaziso lokusebenza eMelika
ukugwetywa kwangaphambili okanye ukugwetywa kolwaphulo-mthetho olubandakanya ubuqhetseba okanye ubungqina bobuxoki
ilayisensi esebenzayo yokuthengisa izindlu nomhlaba
Nceda unxibelelane nomlungelelanisi wethu wovavanyo, uJennifer Cuevas, apha [imeyile ikhuselwe] okanye kwi-815-668-4412, yokucela isicelo, okanye ukuba unemibuzo malunga neli thuba. Nceda ukhankanye indawo ohlala kuyo kwi-imeyile yakho. Siyathemba ukuva kuwe!
Nxibelelana noMlawuli weeNkonzo zamaVolontiya kaRhulumente wasePrairie ngolwazi oluthe kratya malunga namathuba amavolontiya angengabo abommeli kwindawo yakho. (imeyile: [imeyile ikhuselwe])
IIMEKO ZE-AMERICORPS VISTA ZIYAFUMANEKA
Iiyure: NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, ngo-8: 30 kusasa ukuya ku-5: 00 emva kwemini (ngokubanzi)
Yintoni i-AmeriCorps VISTA?
Inkqubo ye-AmeriCorps-VISTA yinkqubo yesizwe yenkonzo apho abantu bazinikele kunyaka opheleleyo wenkonzo yexesha elizeleyo ukunceda ukulwa nentlupheko. Ukubuyisa inkonzo yabo, amalungu abonelelwa ngokuqhelaniswa noqeqesho, isibonelelo sokuhlala malunga ne- $ 970 ngenyanga, izibonelelo zononophelo lwabantwana, kunye nesicwangciso esisiseko sokhathalelo lwempilo. Ukugqitywa kwexesha labo lonyaka, amalungu e-VISTA anokukhetha ukufumana umvuzo omncinci okanye ibhaso lemfundo le- $ 5,645.
Kukho iintlobo zezinye izibonelelo ezinokubakho kubandakanya ingqwalaselo eyodwa yokuqeshwa komdibaniso. Ngelixa ezi zibonelelo ziluncedo, isibonelelo sokwenyani senkqubo ye-VISTA ngamava okwenyani enza umahluko eluntwini.
IiVISTA kwiiNkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie
Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wasePrairi ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo obonelela ngeenkonzo zoncedo lwezomthetho ngaphandle kwentlawulo kubantu abanomvuzo ophantsi kumantla nakumbindi weIllinois. I-Prairie State ineeofisi eBloomington, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rock Island, Rockford, St. Charles, Waukegan nase Wheaton, eIllinois. Ezinye zeendawo zethu ze-VISTA zichaze iiofisi ezithile kwaye kwezinye iiprojekthi sinobhetyebhetye ngakumbi apho singabeka khona iVISTA.
IiVISTA zivela kumava ohlukeneyo kubandakanya abaphumeleleyo kwikholeji, amagqwetha, iingcali zomhlala-phantsi, kunye nabantu abangena kwakhona kubasebenzi. Ngelixa izikhundla zineenjongo ezithile kunye neenjongo, ii-VISTA zizisa iitalente zazo ezizodwa kunye nobuchule babo kwisikhundla. Amandla, ubuchule, kunye neetalente zeeVISTA zethu kunye nokusebenzisana okukhulu okwenzele iinkqubo eziyimpumelelo.
Bhalisela i-VISTA apha:
Faka isicelo kwezi zithuba:
Ukuba unemibuzo, nxibelelana noGail Walsh apha [imeyile ikhuselwe].
Umsebenzi wePro Bono uthetha ukuba unceda umntu odinga uncedo kwaye akanandlela yokuqesha igqwetha labucala. Ikwalilo nethuba lokwenza ifuthe elihle kwindawo esihlala kuyo. ”
Ummelwane waseBozeman uPatton & Noe, LLP (Moline, IL)
“Kuyanelisa kakhulu kum. Kuyandinceda ukunceda abantu kuba ndiyakonwabela ukunceda abantu. Kwaye xa ndinceda umntu kwaye ekugqibeleni ityala bayandiwola okanye bancume bathi enkosi kakhulu ngokundinceda, ngethemba lokuba ndiyakwazi ukubanceda ebomini babo kwaye ndibasuse kwimeko ethile. ”
Inkampani iVan Der Snick Firm, iNk. (ISt.Charles, IL)
Nantoni na ozimisele ukuyenza okanye onokuyenza, nokuba kukufowuna okanye uphendule imibuzo. Ngumsebenzi onomvuzo kakhulu xa uwenza kwaye unceda aba bantu bafuna uncedo. ”
UJennifer L. Johnson
IZanck, iCoen, iWight kunye neSaladin, iPC (iCrystal Lake, IL)
“Ndifumanisa ukuba umsebenzi uwanelisa ngendlela emangalisayo, ngakumbi umsebenzi endiwenzayo. Kukho abantu abazama ukufumana ithuba lesibini ebomini kwaye banoxabiso kakhulu kuye nabani na onomdla kubo kwaye iziphumo ziye zanelisa kakhulu. ”